Ukutya kweekhalori ezingama-400: kunjani, kwimenyu yansuku zonke nangeveki | Ukutya kukaNutri
Esi sisidlo esenzelwe abantu abafuna ukuphulukana nalawo maphawundi ongezelelweyo. Yirejimeni apho uyakufaka isixa esincinci sokutya, iya kukuvumela ukuba unciphise umzimba phakathi kwe-4 ½ kunye ne-5 ½ kilos kwiintsuku ezili-10. Kuya kufuneka ulawule iikhalori ozifakayo kuba azinakugqitha kuma-400.
Ukuba uzimisele ukubeka le ndlela yokutya, kuya kufuneka ube kwimeko esempilweni, usele amanzi amaninzi ngangokunokwenzeka yonke imihla, ungcamle infusions yakho ngeswiti kunye nexesha lokutya kwakho ngetyuwa kunye neoyile yomnquma kuphela.
1 Uphulukana kangakanani nokutya kweekhalori ezingama-400?
2 Imenyu yemihla ngemihla
3 Imenyu yeveki
Uphulukana kangakanani nokutya kweekhalori ezingama-400?
Kuyinyani ukuba ngokutya okunjalo, iikhalori ziphantsi kakhulu kunokuba sinokucinga. Ke ukuba silandela isicwangciso kwileta Singaphulukana ne-4 okanye i-5 kilos ngeveki. Kodwa ewe, kungcono ukwenza ukutya kweekhalori ezingama-400 kwiintsuku ezisi-8 okanye ezili-10 kuphela.
Emva kwexesha, sinokubandakanya ubuninzi kodwa kuhlala kukutya esikucebisayo. Ngale ndlela, umzimba umanzisa izakhamzimba, iiproteni okanye iivithamini eziyifunayo, kodwa uhlala ulawula umba wobunzima.
Desayuno: 1 ukumiliselwa kukhetho lwakho olusikiweyo ngobisi olun skim kunye ne-1 yogwele wengqolowa.
Kusasa: 1 iyoghur ephantsi enamafutha eneziqhamo.
Isidlo saseminiI-ligth broth, 1 ukukhonza ukhetho lwakho lwesaladi eluhlaza yemifuno kunye ne-1 yesiqhamo osikhethileyo. Ungasela isixa somhluzi osifunayo.
Emva kwemini1 iglasi yeorenji okanye ijusi yeziqhamo.
Ukutya okutyayoUkufakwa kwe-1 kokukhetha okusikiweyo ngobisi olun skim kunye neebiscuits zamanzi ezi-2 okanye i-bran elula.
cenaUmhluzi we-ligth, 50g. inkukhu, intlanzi okanye inyama, 50g. yetshizi yesalut, isahlulo esinye sesaladi edityanisiweyo kunye nenxalenye e-1 yokukhanya kwejelatin. Ungasela isixa somhluzi osifunayo.
Después isidlo sangokuhlwa: ukumnika i-1 ngokhetho lwakho.
Ezi ntlobo zokutya, apho sithetha ngokongeza iikhalori ezimbalwa emzimbeni, kufuneka zenziwe ngexesha elifanelekileyo. Kungenxa yoko le nto imalunga nokutya ekuthiwa kukutya okukhawulezayo. Siza kufumana ntoni ngayo? lahla iikhilogram ezimbalwa ezongezelelweyo. Kodwa kuyinyani ukuba ayifani yonke imizimba efanayo, ngamanye amaxesha sinokulahleka ngaphezulu kunokuba besicinga. Ewe kunjalo, akufuneki sigqithise izidlo ezinje. Kuhlala kubhetele ukuyenza iintsuku ezimbalwa kwaye utye rhoqo kodwa uhlala usempilweni kwaye ulungelelene ukugcina ubunzima bethu.
Sikushiya ngemenyu yeveki nganye ukuze ubeke ukutya kweekhalori ezingama-400 ngokufanelekileyo nangokulula:
Isidlo sakusasa: Zimbalwa iinkozo ezipheleleyo ezinama-200 ml obisi olunamafutha.
Ukutya: Ipleyiti entle ye lettuce kunye nekhukhamba
I-snack: Ijeli elula
Isidlo sangokuhlwa: Iplate ye-broccoli ephekiweyo ene-yogurt ekhutshiweyo
Isidlo sakusasa: Ukufakwa kunye nesilayi sethosi yengqolowa epheleleyo kunye netispuni yejam elula
Isidlo sasemini: Isitya sesuphu sinepasta yengqolowa epheleleyo
I-snack: I-yogurt edibeneyo
Isidlo sangokuhlwa: Iigram ezingama-75 zenkukhu enesaladi exubekileyo
Isidlo sakusasa: Ukufakwa okanye ikofu yodwa kunye nesonka sengqolowa kunye nezilayi ezibini zebele
Isidlo sasemini: i-95 gram yenyama yenkomo eyosiweyo kunye ne-tomato kunye nesaladi yespinatshi
I-snack: ikomityi yamaqunube
Isidlo sangokuhlwa: Isaladi exutyiweyo, netshizi encinci kunye nejeli ekhanyayo
Isidlo sakusasa: Iglasi yobisi olunamafutha kunye neenkozo ezipheleleyo
Isidlo sasemini: Zimbalwa iilentile ezinechard
I-snack: Isiqhamo okanye ijeli
Isidlo sangokuhlwa: isuphu yemifuno elula kunye neyoghur esecwecwe
Isidlo sakusasa: Iglasi yejusi yendalo okanye ikofu iyodwa okanye ukumiliselwa kunye neenkozo ezipheleleyo
Ukutya: Isaladi ene-125 gram yentlanzi ebhakwe okanye ebilisiweyo.
I-snack: Ibha yetshokholethi ehambelana nayo
Isidlo sangokuhlwa: Isaladi kunye nesipinatshi, ihlumelo leembotyi kunye neetumato okanye iminqathe. Ungayinxiba ngejusi encinci kunye nepunipoon yeoyile yomnquma.
Isidlo sakusasa: Iglasi yeti eluhlaza enee-toast ezimbini zesonka sengqolowa
Mid-morning: Ikomityi yamaqunube
Ukutya: iigram ezingama-100 zeturkey ene-steamed broccoli
Isidlo sangokuhlwa: Isuphu yemifuno kunye neyogathi
Isidlo sakusasa: Iglasi yobisi olunamafutha okanye ukumnika kunye neicookies ezimbini ezingenaswekile
Ukutya: iigram ezingama-20 zerayisi emdaka ngechard okanye isipinatshi
I-Snack: Isiqhamo se grapefruit
Isidlo sangokuhlwa: Isaladi yeArugula kunye neseleri kunye netshizi entsha.
Khumbula ukuba kuya kufuneka usele amanzi amaninzi kwaye iingcebiso zokungeniswa ziyacetyiswa nanini na ufuna. Unokuthatha Umhluzi okhanyayo owenziwe ekhaya xa ufuna. Isaladi kunye nentlanzi okanye inyama zinongwe ngamakha. Xa upheka ungongeza icephe leoyile yomnquma, emini nasemini, oko kukuthi, ubuninzi beetispuni ezimbini ngosuku. Ayisiyondlela ekucetyiswa ngayo kubantu abanenkcitho enkulu yamandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Isibonelelo sokutya » Ukutya kweekhalori ezingama-400
Iikhalori ezingama-400? Yeyona nto ingenangqondo endiyivayo kwaye kubonakala kum kungoyena mntu ungenankathalo ukuba olu hlobo lwezinto ezimbi lushicilelwe kwi-intanethi oku kutya kukungcola kwaye nangona umntu ophakathi enokulahla iikhilogremu ezintlanu ngeveki ukuba andithandabuzi ushiyeke phezu kwawo wonke umbane womzimba owufumanayo emva kwentsuku ezimbalwa, ngaphandle koko wonakalisa imetabolism yakho ukuyiguqula ibe ngumatshini ocothayo kwaye ekuhambeni kwexesha ayinakubakho into yokuba unciphise umzimba ngaphandle kokuba ufuna ukuzibona amathambo ngaphandle kwesihlunu. eyona nto ilungileyo kukuhla kancinci kancinci kwaye ungaluhoyi olu hlobo lokutya okungalunganga.
Inyaniso kukuba ngokuncedisa ngee-multivitamini ukuqinisekisa ukutya kwakho kwemihla ngemihla kwee-micronutrients, nakuphi na ukutya okuthintelayo kusebenza kwixesha elifutshane, nantoni na oyityayo (nokuba yi-400 yeekhalori ezityebileyo ngosuku). Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kweziqhamo kunye nemifuno kuluncedo olukhulu kwimpilo kuba banento ebizwa ngokuba yiphytonutrients. Oku kutya kusebenza kuthathelwa ingqalelo ukuba umzimba wentloko unexabiso lamafutha aqokelelweyo afumanekayo ukusitha intsilelo yekhalori. Eyona nto ikrelekrele ukuyenza iya kuba kukuqinisekisa ukuba iiprotein zithatha malunga ne-1g x ubunzima bomzimba kunye nokuncedisa ngomsebenzi womzimba, ukuze ugcine ubunzima obucekeceke. Kwelinye icala, isiphumo esibuyayo asiyonto ngaphandle kokutya kwakhona, ngaphezulu kweekhalori ezifunwa ngumzimba, ke ngoko ukutya kwezi mpawu kulandelwa kukufundiswa kwakhona kokutya akunakukhokelela kwisiphumo esibizwa ngokuba sisiphumo esibi.
Ilunge kakhulu! Nditshintshe ezinye izinto kwaye ndazilandela ngaphandle kokuya ngaphezulu kweekhalori ezingama-400, ndilahlekelwe zii-5 kilos kwiintsuku ezili-10 zokuqala kunye ne-4 kwiintsuku ezili-10 ngaphezulu ngokutya okufanayo !! Ndiceba ukuyilandela ezinye iintsuku ezili-10 zokugqibezela inyanga 🙂
Ukuba ufuna ukunciphisa umzimba undwendwele ingcali yesondlo.
Oku kutya akunamsebenzi kwaye kuyingozi emzimbeni wakho.
Imfundo yokutya ibalulekile kwimpumelelo yesicwangciso sakho sokutya. Mamela kwimamela kum! Ingcebiso yam njengengcali yokhathalelo lwempilo.
Kuyothusa ukuba olu hlobo loshicilelo lufumaneke ebantwini!
Akukho mntu unokutya oku kutya! Yonke into elahlekileyo iya kuba ngamanzi omzimba, kwaye ayizukuthatha thuba lide ukuyifumana kwakhona. Oku akusebenzi nje kuphela, kodwa kusongela impilo kwaye akunakho ukuqinisekiswa kwezesayensi.
Ukutyelela ingcali kunye ngokudibeneyo ukuzoba ukutya okunesondlo okwenzelwe wena kunye neemfuno zakho kuya kuhlala kuyindlela elungileyo.
Ngokucacileyo naluphi na uhlobo lokutya olubekwe kwi-intanethi.
Kukutya okuntsokothileyo kuba akwanelisi ngokupheleleyo izondlo eziyimfuneko ekufuneka sizisebenzise mihla le.
FATS BONKE, MONELE ABO ABANOKUPHILA UBUNTU
Ewe abanayo into ebhetele abanokufaka kuyo, musa ukuphawula.
Le ndlela yokutya yenzelwe kuphela abantu abane-BMI enkulu kune-80, oko kukuthi, bamalunga ne-100 ukuya kwi-150 yeekhilogram zokutyeba kakhulu.
UVioleta Chaparro A sitsho
Inyani yile yokuba ndineengxaki ze-dyslipidemia kwaye akukho nto, nditsho namayeza, andincedileyo ukulawula amanqanaba.
Kuphela ngokutya ngaphandle kwe-gluten okanye i-lactose kunye neziqhamo ezimbalwa, amanzi amaninzi kunjalo.
Ndiyathemba ukuba oku kuyandinceda ukuba ndiyifumane.
Phendula u-Violeta Chaparro A
UMarta Mora Santamaria sitsho
Umzekelo ogqibeleleyo wokwehla kobunzima akufani nokuba sempilweni. Oku akunempilo kwaye kuyingozi, yeka ukuxoka kwi-Intanethi. Njengomfundi ofundela ubugqirha kunye nomntu okhe wakwihlabathi lokuzilolonga ixesha elide, ukuba ufuna ukunciphisa umzimba, yitya ukutya okunezakha-mzimba, kunye namafutha agcweleyo (ungalibali ukuba amafutha ayimfuneko kodwa asempilweni awahluthwanga. ), ii-carbohydrate ezisempilweni kwaye akukho calories zingenanto, iprotheni (ngakumbi ngakumbi xa ufuna ukufumana ubunzima bemisipha). Yenza isiseko sokutya kwakho ziziqhamo, imifuno kunye nembotyi, intlanzi eluhlaza okwesibhakabhaka kwaye, nangona inyama ebomvu ineeproteni ezininzi, inyama emhlophe ihlala isempilweni. Yenza amanzi abe sesona siselo sakho siphambili kwaye wenze ukuba usele iziselo ezinencasa ezikhethekileyo zeswekile Konke oku kudityaniswe nokusilela kwekhalori kunye nokuzilolonga (amandla omsebenzi + we-cardio). Ukwehla kobunzima obunempilo kuhlala kunenkqubela phambili kwaye kuyanelisa, oku kutya kuchazwe apha kuyimpembelelo ye "boom", kuyakwenza ukuba unciphise umzimba ngendlela engenampilo kwiintsuku ezimbalwa kwaye yonke into iya kuhlala injalo. Akufanelekanga ukubeka ingozi kwimpilo yakho.
Phendula uMarta Mora Santamaria